Akụkọ - Kwado mmepe sayensị na teknụzụ nke Free Trade Port Haikou Council maka Nkwalite nke International Trade na-akwalite mmekọrịta miri emi n'etiti ụlọ ọrụ Hainan na mba ụwa
Kwado usoro mmepe sayensị na teknụzụ nke Free Trade Port Haikou Council for the Promotion of International Trade na-akwalite mmekọrịta miri emi n'etiti ụlọ ọrụ Hainan na mba ụwa.
Site n'enyemaka nke Haikou Council for the Promotion of International Trade, Hainan Huayan Collagen Technology Co., Ltd. bịanyere aka na nkwekọrịta nkwekọrịta na Denmark Bio-X Institute na Lyngby Scientific n'ehihie nke November 20, iji guzobe mmekọrịta mmekọrịta.
Aghọtara na mbinye aka nke nkwekọrịta ahụ n'etiti ndị abụọ ahụ na-egosi na Hainan Huayan ga-ewebata ọrụ teknụzụ kachasị elu nke ụwa site na iwu nke ọdụ ụgbọ mmiri na-akwụghị ụgwọ, ọ na-egosiputa mmepe ọrụ Hainan n'ọhịa nke peptides ọgwụ.
Hainan Huayan Collagen Technology Co., Ltd. bụ mba elu-tech ụlọ ọrụ tụnyere ngwaahịa mmepe, mmepụta na ahịa. Ọ bụkwa ụlọ ọrụ mbụ na China itinye aka na nyocha na mmepe nke mmiri peptides collagenzed hydrolyzed. Ihe karịrị 80% nke ngwaahịa ya na-ebupụ na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia na ahịa ndị America. Biolọ ọrụ Danish Bio-X Institute bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka nkà na ụzụ biomedical nke dị na Denmark, nke nwere akụ na ụba ndị a ma ama n'ụwa na ọtụtụ ụlọ ọgwụ na-ahụ maka ọgwụ na ọgwụ na mmepe mmepe.
N'otu oge ahụ, Guo Hongxing, onye isi njikwa Hainan Huayan Collagen Technology Co., Ltd., kwuru na mbinye aka a ga-eweta nkwado ọrụ aka siri ike maka ụlọ ọrụ iji melite ogo na arụmọrụ. Anyị ga-erite uru nke iwu nke Hainan Free Trade Port iji mepụta ngwaahịa zuru ụwa ọnụ na usoro sara mbara nke ahịa ndị ahịa ụwa, ma gbalịa wuo ugwu ugwu na teknụzụ n'ọhịa nke peptides na-ahụ maka mmiri na ọdụ ụgbọ mmiri na-akwụghị ụgwọ. .